Casriyaynta Iceweasel ee Debian Wheezy | Laga soo bilaabo Linux
Casriyaynta Iceweasel ee Debian Wheezy
Tesla | | Aplicaciones, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Waxaan ku soo bandhigayaa barta daabacaadda cashar fudud oo cusbooneysiin ah barafka en debian hiinraag. Waxaa laga yaabaa inay nagu dhacdo, sababo kala duwan awgood, waxaan dooneynaa inaan u cusbooneysiino Iceweasel noocyada ugu dambeeyay (Iyo xitaa intaa ka sii badan heerka cusbooneysiinta ee Mozilla ay qaadaneyso). Tani waxay macquul ku tahay siyaabo badan oo kala duwan. Si kastaba ha noqotee waxaan ku tusayaa mid aanan aqoon oo uu ilaaliyo Kooxda Debian Mozilla. Haddii, liddi ku ah, aad rabto inaad ku bedesho Iceweasel Firefox waxaan kuu gudbinayaa adiga hage de faahfaahsan.
Aan u tagno markaa:
- Marka hore, waxaan ku darnaa feyl gudaha ah /etc/apt/sources.list.d/ loo yaqaan (waxay lahaan kartaa magac kasta oo aad rabto, laakiin leh kordhinta) . liiska ) liiska iceweasel.list. Waxaan sidoo kale si toos ah wax uga beddeli karnaa /etc/apt/sources.list. Kiiskeyga, waxaan badanaa la sameeyaa tifaftiraha nano:
- Markaan ku jirno nano, waxaan kuqornaa waxyaabaha soo socda feylka:
- Waan keydineynaa feylka waana ka baxeynaa. Hadda, waa inaan cusbooneysiinaa apt-get:
- Ugu dambaynna beddel kuweenna barafka qaab ahaan sii daayo (hadda 20):
Iyada oo waxaas oo dhan, waxaan hadda ku raaxaysan karnaa nooca ugu dambeeyay ee barafka.
Mabda 'ahaan, geeddi-socodku waa inuusan bixin wax qalad ah ama guuldarro ah. Sidaas oo ay tahay, khatartaada ku samee.
Ugu dambeyntiina, haddii cusbooneysiintu na siiso xoogaa guuldaro muhiim ah, kaliya rakib muhiimka ah ka keydka isku xirka soo socda:
Nidaamkan waxaa lagu fulin karaa qaybinta kala duwan ee Debian (Lenny, Tuuji, Wheezy iyo xasillooni la'aan) iyo noocyo kala duwan oo ah barafka. Sidaa darteed waxaan tixraacayaa bogga rasmiga ah ee Kooxda Debian Mozilla Team si aan ula tashado, iyo sidoo kale halka laga helo dhammaan macluumaadkan:
Waxaan rajeynayaa inay waxtar kuu leedahay! Waad salaaman tihiin bulshada!
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Casriyaynta Iceweasel ee Debian Wheezy
Qoraalkii ugu horreeyay ee wanaagsan !! Iyo tan ugu fiican, wax shaqo ah kuma qaadanin sixitaankeeda .. taasi waa wax fiican 😀
Mahadsanid! Taas aawadeed waxaa jira hage loogu talagalay wada-hawlgalayaasha desdelinux 😉
Waxaan isku dayay Iceweasel tan iyo markii aan rakibay My Debian Squeeze iyo inaan runta sheego, waa wax weyn (labadaba xasiloonida iyo taageerada tijaabada labadaba sifiican ayaa loogu sharaxay mozilla.debian.net umana baahnid inaad isku buuqdo markaad isticmaaleyso).
Aynu cusbooneysiino si aan u aragno sida ay wax u socdaan.
Aad baad ugu mahadsantahay, halkan inaad ka tijaabiso Crunchbang!
Waxaan horeyba u haystay Firefox 20. In kastoo aan jeclaan lahaa in intaa ka sii badan waxay ku jirtay keydka mozilla.debian.net halkaasoo noocyada esr, beta iyo aurora ay iyaguna ku jiraan.
Sidoo kale waa laga rakibi karaa bakhaarada Tanglu, xilligan waxaan Tanglu ku rakibay Vbox waxayna adeegsataa nooca 20.
Xagee ka soo dejisay Tanglu? Waxaan sidaa u leeyahay sababtoo ah bogga rasmiga ah looma soo dejin karo ...
ma jiraan iso of tanglu. waa inaad soo dejiso debian 6, ku dar tanglu repos oo rakib.
Nasiib darrose, Firefox uma hoggaansamayso dardaarannada softiweer ee bilaashka ah ee Debian maxaa yeelay wax ka beddel kasta oo lagu sameeyo koodhka ilaha waa inuu kormeeraa aasaaska Mozilla lafteeda waana sababta ay ugu magacdareen Firefox maadaama ay Iceweasel iyo Mozilla u soo xigteen Iceweasek in tusaalooyinkiisa caanka ah iyo dhoobo badan.
Hase yeeshe, Iceweasel iyo Firefox labaduba waxay ku socdaan ganaax Debian ah, oo lagu daray kii hore ayaa xoogaa ka dheereeya kan dambe.
Waad ku mahadsan tahay casharka, waxaan u sameyn doonaa dhaqan.
tanglu, xaggee ka timid daabac xiriiriyaha haddii runti uu jiro nooc Percaff ah
Aynu nidhaahno sudo af Debian lama shaqeysiiyo marka xaqiiqda amarka adigaa iska leh
Haa, waa hagaag. Taasi waa caado xun oo Ubuntu u gelisay inay adeegsato isla nidaamka maaraynta bilaa lambarka sirta ah haddii ay tahay Windows.
Marka la soo koobo, iyada oo ay wax badan ka ficil tahay.
@INDX @germany Warbixin ay soo saartay Tanglu Matthias Klumpp waxay ku faallooneysaa inaad rakibi karto Tanglu adoo adeegsanaya rakibaadda Debian ka dibna wax walba u cusbooneysiin karto Tanglu, wuxuu kaloo kugula talinayaa inaad ku sameyso mashiin dalwad ah, waan sameeyay waana laba maalmood ka hor waan murugooday khilaafaadka pc ee ku tiirsanaanta gaar ahaaneed ee 'grubflx-payload', maanta ayaan dib u cusbooneysiiyay wax khilaaf ahna ma jirin, wiilashu si tartiib tartiib ah ayey u socdaan.
Waxyaabaha kale ee ay sameeyeen ayaa ah inay beddelaan astaanta maadaama tii hore ay aad ugu eg tahay Debian.
Rakibaadda waxaa lagu sameeyay 'Debian wheezy' oo aan lahayn jawi garaaf ah, ka faallee khadadka tixraacaya Debian ee faylka ilo.list kuna dar kuwa soo socda:
deb http://archive.tanglu.org/tanglu/ aequorea ugu weyni waa bilaa lacag la'aan
Kadib waxaan sameeyay cusbooneysiinta nidaamka oo dhan dhibaato la'aan, waxaa jira xoogaa dhibaatooyin ku tiirsanaanta gaar ahaan rakibidda gnome maadaama ay ku jiraan geedi socod shaqeynaya oo buuxa, iyadoo kde aanan wax dhibaato ah qabin. Waxay sidoo kale waydiistaan ​​caawimaad isticmaaleyaasha khibrada u leh abuuritaanka cds-ka ama la shaqeeyey rakibayaasha meel walba.
Halkaan waxaan uga tagayaa xiriiriyeyaasha xiisaha kuu leh.
Casharbaris aad u wanaagsan, gaar ahaan haddii aad ku jirto Wheezy (in kasta oo hagaha Ingiriisiga ee ka muuqda mozilla.debian.net uu si ficil ahaan ah ula mid yahay wixii ay halkan ku daabaceen), runti waa waxtar.
Hal shay: haddii aad rabto Iceweasel inuu ku soo muuqdo Isbaanish, kaliya ku qor qadka amarka asal ahaan: "apt-get rakib -t tijaabo ah iceweasel-l10n-es-es" (in kastoo ay "es-es" shaqeeyaan, haddana waad isticmaal "es-mx", "es-ar" iyo "es-cl" sida ku cad nooca deegaanka ee aad doorato).
Xaq, mozilla.debian.net waxay ku leedahay isla wax la mid ah. Si kastaba ha noqotee, waxaan u arkaa mid xiiso leh in tilmaamaha lagu dhigo Isbaanish. Ka sokow, dad badan ayaa laga yaabaa inaysan garanayn boggaga internetka ee qaybaha mashruuca Debian. Sidii kiiskeygu ahaa ilaa shalay 🙂
Eray talo ah: ha raacin casharrada EsDebian, maxaa yeelay waxay noqon karaan kuwo duugoobay ama mugdi badani ku jiro.
Wiki Debian-ka waxay ku leeyihiin talooyin aad u wanaagsan, laakiin dayactir yar ayaa ku jira. Xitaa sidaas oo ay tahay, dukumiintiyadoodu aad ayey faa'iido u leedahay in la caddeeyo shakiga, golahooduna runtii waa kuwo firfircoon waxayna kaa caawinayaan xitaa dhibaatada ugu yar (dhab ah, dukumiintiyadooduna waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican jawaabahooduna waa kuwo deg deg ah).
Aad baad u mahadsantahay, talo fiican.
Kani waa maqaal ee ma ahan jug-jugleyda aan ku qoro tayda.
Waxaan cusbooneysiiyay iceweasel dhib la'aan. Iceweasel 10 wuu ii shaqeeyaa si weyn marka laga reebo muraayadda tooska ee aanan garanaynin sababta markii aan dhageysanayay raadiyaha ama aan u daawanayay fiidiyowyo in muddo ah ay u baxdaa CPU badan. Ma aqaano haddii ay ku dhacdo qof kale Iyadoo 20-ka hadda aan dhibaato lahayn. Kaliya laakiin aan u dhigay nooca xasilloonida ayaa ah in la ilaaliyo nooca biraawsarka ee imminka waxoogaa dhacsan xitaa haddii ay yiraahdaan waa nooc ka mid ah lts oo iskaba daa sannad ka dib. Dhowr bilood ka hor ayaan mar horeba dhibaatooyin ku qabay biraawsarka oo isku tuuraya markii aan galayay bogagga qaarkood.
Mozilla.debian.net waxay yiraahdaan mar dambe ma taageeri doonaan nooca 3.5 ee ku yimaada asal ahaan xasilloon (tuujin) waxayna kugula talineysaa inaad cusbooneysiiso biraawsarka Taasi waa sababta aan u cusbooneysiiyay Iceweasel-ka oo ay sameyneyso waxyaabo la yaab leh (Waxba kama haysto flash, waxay ku socotaa si dhakhso leh oo dheecaan leh markaad daawato YouTube waana ay ka dheereysaa kan Windows).
Hadda, waxaan garwaaqsaday in Iceweasel / Firefox ay socdaan iyada oo aan istaagin oo ay bogagga shabakadda si habboon u soo celineyso iyada oo aan la xirin (waxaana joogaa Lenium 4 jaban).
Runtii aad baan u jeclahay Iceweasel, ku dhowaad uun hadafka aan ku rakibo Firefox-ka Debian.
Aad baad u mahadsantahay !!! Dhammaan waa ok
Ku jawaab lorenzosol
oooopps! kiiskeyga ma shaqeyn
iceweasel: Waxay kuxirantahay: xulrunner-21.0 (> = 21.0-1) laakiin ma rakibi doono
Ku jawaab rafadeb
Qaabkani wuu fiicnaa halka Wheezy uu ahaa laanta imtixaanka laakiin hadda dhib ayuu keeni karaa, waxaa ugu wanaagsan in la raaco tilmaamaha lagu tilmaamay http://mozilla.debian.net/ kuwaas oo:
Adiga ayaa kudaraya deb http://mozilla.debian.net/ wheezy-backports iceweasel-sii deynta liiskaaga. liiska
Markaad qalad hesho waxaad rakibaysaa xirmada furaha ee la yiraahdo pkg-mozilla-archive-keyring
Mar labaad ayaad cusbooneysiineysaa
Waxaad ku rakibaysaa Iceweasel apt-get rakib -t wheezy-backports iceweasel (in kasta oo aan doorbidayo karti)
Si wax ku ool ah; habka aad sheegtay waa midka ugu fiican ee la cusbooneysiin karo.
Waad ku mahadsan tahay waqtigaaga iyo waxbaristaada
Wuu igu celcelinayaa in biraawsarkani aanu oggolayn HTML5…!
oo hadda maxaa la sameeyaa?
Aad uma jecli laakiin waan u bartay isticmaalkiisa, Firefox-na maanta waa mid aad u gaabis badan oo had iyo jeer burbura, runtiina anigu ma jecli mar dambe, waxaan doonayay inaan sameeyo aalad ii gaar ah laakiin kaliya ma wada qaban karo haddii qof jeclaado xiisaynaya kaqaybqaadashada ilasoo xiriir
Jawaab Mauricio Yaman Yusuf
Soo hel oo ka saar faylasha nuqullada ah nidaamkaaga qashin